Beledweeyne: Haween barakacayaal ah oo aasaasey ganacsiyo si carruurtooda waxbarashada uga bixiyaan - Radio Ergo
(ERGO) – Maryan Qaasim Nuur ayaa nolasha sagaal carruur ah ka maaraysa iibinta dhar u saaran miis yar oo u yaalla iridka hore ee xerada Durdur oo ku taalla deegaannka Ceeljaalle ee duleedka magaalada Beledwayne. Ganacsigan oo ay ku jirta muddo laba bilood ah ayay maalinti ka heshaa lacag u dhaxayso 5-8 doollar, waxayna ii bisaa dharka haweenka iyo carruurrta.
Dhibaato badan ayay ku qabtay Maryan helidda nolol maalmeedka qoyskeeda. Dharka ayay dayn uga soo qaadataa dukaan ku yaalla magaalada Beledwayne taasi oo marka ay iibiso dib ugu celiso lafaha dukaanka halka faa’dadana ay u isticmaasho arrimaha qoyskeeda. Waxay sheegtay in u jeedooyinka ganacsiga u furatay tahay in ay hesho dhaqaale ay ku maarayso nolasha carruurteeda iyo haweenka xerada ay helaan dhammaan adeegga ay u baahan yihiin oo aysan banaanka waxba uga baahan.
“Bagaashka wixii loo baahdo hadda waa laga helaa xerada dhaxdeeda wax dhibaato ah hadda nama haysato, guud ahaan alaabihi loo baahnaa gudaha xerada ayaa laga helaa”
Maryan oo ay xerada uga dhisanyihiin Laba aqal oo buush ah, ayaa horay u ahayd xoolo dhaqato ku naalaan jirtay miyiga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, Waxay halkan timid kadib marki 80 oo ari ah ay kaga le’deen abaar, taas oo ku kaliftay inay nolal u raadiso carruurteeda.
Ka hor ganacsigan waxay subax walba u shan kilo mitir u lugayn jirtay magaalada Beledwayne si ay u soo qabato shaqooyin dhanka nadaafadda ah, oo maalinta ay hesho ka soo galijirtay dhaqaale gaaraya 4 doollar.
Maryan oo ka tirsan 11 haween ah oo fikrado ganacsi oo kala duwan ka hirgaliyay xeradan, ayaa sheegtay inay qorashaynayso in carruurteeda ay geyso waxabarasho, madaama dhaqaalaha ka soo galo ganacsigan qayb ka mid ah ay kayd ka dhigato.
Haweenka kale ee ganacsiyada samaystay waxaa ka mid ah Xaawo Maalin Cismaan oo sheegtay inay heshay fursad ay ku caawiso ninkeeda oo soo saara biilka qoyska, kaas oo qabta shaqo muruqmaal ah, oo aan joogta ahayn.
Xaawo oo haysta lix carruur ah ayaa hilib ku dhex iibisa xerada, maalmah asi fiicna wax looga iibsado waxaa ka so ogala lacag u dhexaysa 4-8 doollar oo faa’ido.
”Hal neef ayaan maalintii qalaa wax uun ayaan ka raadsadaa oo rabbi iiga calfo, waan isku celcelshaa marka ganacsigeyga sidaas ayuu yahay dadka xerada ayaa iga iibsado iyo dadka kale ee soo raaca iyo waxii maqal iyo socod ku yimaadda marka nolosha dhan kuma wada maareeyn karo waxbarasho iyo daawo ayaa la rabaa laakiin nolol maalmeedka ayaan ka raadsadaa.
deegaanka Nagaarta oo hoos yimaado degmada Matabaan ayey Xaawo ka soo guurtay billoowgii 2020, kadib markii ay ka dheceen dagaallo qabaa’il. Wali carruurteeda waxbarasho lama gayn maadaama aysan heli Karin dhaqaalah alagu dhigto iskuullada.
Faadumo Cismaan Cali oo ka mid ah 11 haweenka ah, ayaa ah qofki ugu horreeyay ee ganacsi ka furata xeradan. Sedex iyo toban carruur ah oo ay dhashay ayay nolashooda ka soo saartaa gganacsi bagaash ah.
laba ka mid ah, wiilasheeda ayaa dhigta iskuulka hoose dhaxe ee Bokhaari oo ku yaalla xaafadda Xaawo taako ee magaalada Beledwayne oo kiiba ay ka bixiso lacag dhan 20 doollar.
Faadumo iyo 10 haweenka ah ee ganacsiyada haysta, ayaa sheegay inay jiraan dad danyar ah oo xerada kula nool oo aan awoodin mararka qaar inay wax iibsadaan, sidaa darteedna ay siiyaan dayn haddii ay iska bixin waayan ay u cafiyaan.